Indlu yamaplanga ekhethekileyo 2 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Indlu yamaplanga ekhethekileyo 2 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLars Møller Bech
Le ndlu ikhethekileyo ye-140 yemitha yesikwere yendlu yamaplanga ibekwe ngokuzolileyo kwaye ingaphazanyiswanga kweyona ndawo inkulu kuyo yonke indawo, kwihlathi lethu elincinci elinamakhulu emithi ejikeleze indlu. Uya kuba namathuba amaninzi okufumana iiroebucks, iipheasants kunye nemivundla kanye ngaphandle kweefestile. Isakhiwo sinomnyango waso kunye nowabucala kwindawo eyodwa yokugcina indalo iHeatherhill apho uya kufikelela kulwandle oluhle ngaphakathi kwemizuzu emi-2 yokuhamba. Ingaphakathi likwisitayela esikhanyayo seNordic esixhotyiswe ngokupheleleyo.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ngaphakathi nangaphandle kubandakanya i-BBQ yegesi kunye nezinto ezininzi zasekhitshini. Amathuba amaninzi okuhamba kunye nokubaleka kwendalo, igalufa, ukuloba, ukuthenga njl.
Indawo yaseRågeleje/Heatherhill/Vejby Strand yahlukile kwaye le ndlu ikwindawo yokufikelela ngasese eHeatherhill inohambo lwemizuzu emi-2 kuphela ukuya elunxwemeni olupholileyo. UneTisvilde Leje, Gilleleje kunye neHornbæk kwimoto emfutshane/ibhasi yokuqhuba umgama kunye ne-Elsinore (Helsingør) kunye neCopenhagen kude kancinane.
Umbuki zindwendwe ngu- Lars Møller Bech
CEO and owner of Nowus Healthcare. Family of 4. Kids 23 and 25.
Siya kuthanda ukunceda kwimibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vejby